I-Budapest, eHungary - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBudapest
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBudapest
Bukela ividiyo ngeBudapest
I-Budapest (indlela yokubiza isiHungary isondele ku- "boo-dah-pesht") iyidolobha elikhulu Hungary. Njengoba kunesimo esiyingqayizivele sobusha, indawo yomculo esezingeni lomhlaba esezingeni eliphakeme kanye nempilo yasebusuku ethokozisayo eyaziswa kakhulu phakathi kwentsha yaseYurophu futhi, okokugcina kodwa okungatheni, umnikelo ocebile wokugeza ngemvelo okushisayo, iBudapest ingenye ejabulisa kakhulu futhi amadolobha ajabulisayo. Ngenxa yesimo sayo esihle nokubukeka kwayo ibizwa ngokuthi "Paris eMpumalanga ”.
Ngo-1987 iBudapest yanezelwa kuhlu lwe-UNESCO Umhlaba Wamagugu ngokubaluleka kwamasiko nangokwakhiwa kwamaBhange aseDanube, iBuda Castle Quarter kanye neAndrássy Avenue.
I-Budapest yanamuhla ingumphumela wokuhlangana okungokomlando kwamadolobha ahlukene eBuda nePest (kanye ne-Óbuda elincane nelikude), futhi kusesejwayelekile ukubhekisa indawo yokudlela "eseBuda" noma "ehlala ePest" . Ngokuphatha, lo muzi uhlukaniswe waba yizifunda ezingama-23.
IBudapest iyinhlokodolobha yezomnotho, yomlando kanye namasiko eHungary, enezakhamizi ezingaba yizigidi ezimbili nezivakashi ezingaba yizigidi ezi-2 ngonyaka. Abantu baseHungary bayaziqhenya ngalokho inhlokodolobha yabo enhle nokunikela ngayo emasikweni aseYurophu. Babuye baziqhenye ngolimi lwabo oluhlukile oluhluke kakhulu kuzo zonke ezinye izilimi zaseYurophu.
Ngenkathi iBuda ibe yinhloko-dolobha yaseHungary - noma leyo ndawo ethathwa ngabantu base-Osman - engxenyeni engcono yeminyaka eyinkulungwane, iba yidolobha elihle kakhulu ngesikhathi sokufukula okusheshayo kwezwe ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Inani labantu abayizigidi eziyi-2.1 ngonyaka we-1989 lehle ngokomthetho ngenxa yokwenziwa emadolobheni.
Indawo yokuqala yokuhlala endaweni yaseBudapest ibalwa ezizweni ezingamaCelt. Ngesikhathi sekhulu lokuqala AD, ukuqiniswa kwesiRoma endaweni ka-Óbuda (manje okuyingxenye yeBudapest) kwathuthuka kancane kancane kwangena edolobheni lase-Aquincum elaba inhloko-dolobha yesifundazwe seLower Pannonia ngo-AD 106. Ekuqaleni i-Acquincum yayi impi yaseRoma kuphela eyayixazululeka futhi yaphenduka kancane kancane yaba yindawo yokuhlala. Kwakuyisikhungo esiyinhloko seSifunda sasePannonia, saba indawo yokuhweba ebaluleke kakhulu. Kulezi zinsuku indawo eyayembozwe yi-Acquincum ifana nesifunda Óbuda ngaphakathi kweBudapest. I-Acquincum iyindawo eyinhloko neyondolozwe kahle yemivubukulo yaseRoma yaseHungary. Ishintshwe imnyuziyamu enezingxenye ngaphakathi nangaphandle. Amanxiwa aseRoma e-Aquincum abhalwe cishe ngekhulu le-II nelesi-III (isikhangiso). Abavubukuli ngesikhathi somsebenzi wokumba babuyise ukukhanya kwezinto eziningi namatshe ezikhumbuzo. Esikhathini esedlule leli dolobha belike ligayeke imigwaqo nezindlu ezinhle kakhulu ezinemithombo, amagceke kanye nezindawo ezihamba ngamatshe ezimibalabala. Enyakatho nentshonalanga yamanxiwa kunendawo yemidlalo yomphakathi lapho kusabonakala khona amaseli lapho amabhubesi ayegcinwe khona lapho kulwiwa abashayisibhakela. Umthamo walesi sakhiwo wawungabantu abacishe babe ngu-16,000. AmaRoma aze asungula inqaba eyaziwa ngokuthi yiContra Aquincum ngaphesheya komfula okucatshangwa ukuthi yathuthuka yangena edolobheni lakamuva lePest. Lokhu kwakuyingxenye yamaLimes, amaka umngcele osempumalanga wombuso, futhi kancane kancane yanikezwa yiRoma ekuqaleni kwekhulu lesine, yaba yingxenye yoMbuso Wase-Hun amashumishumi eminyaka. (Ucwaningo lwanamuhla olungokomlando aluhlanganisi ama-Huns namaHungarian, noma igama lowamuva liveza lo mbono owake wathandwa.)
Izivakashi zizokwazi ukuthi (ngaphandle kokuheha izivakashi nezindawo zokudlela), izinto eziningi zibiza kancane eHungary kunaseNtshonalanga Yurophu.
IBudapest inikeza konke amanye amadolobha anamuhla angakunikeza ngokuya ngendawo yokuhlala, ukuzijabulisa, ukuyothenga kanye namasiko. Ukuheha izivakashi, izindawo zokudlela, nendawo yokuhlala kuvame ukukhokhisa izintengo ezindaweni noma ngaphansi kwezindawo ezifanayo eWestern Europe.
Imininingwane Yezokuvakasha Esemthethweni
Ihhovisi lezokuvakasha laseBudapest, 1115 Budapest, uBartók Béla út 105-113. Ungathola izincwajana ezinhle kakhulu nezamahhala. Phakathi kwayo: imephu yeBudapest, imephu yaseHungary enawo wonke amahostela wentsha kanye namanani, incwajana ephelele kakhulu engxenyeni esenyakatho yeHungary (etholakala ngezilimi eziningi).
Isikhungo Sokwaziswa Kwezokuvakasha 1051 Budapest, Sütő utca 2 (Deák Ferenc tér)
Isimo sezulu saseBudapest sihlala njalo ebusika futhi sibanda kakhulu efudumele. IBudapest inomunye umehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa aphakeme kakhulu futhi aphansi kakhulu njengoba irekhodi eliphakeme lingu-40 ° C (104 ° F) nerekhodi eliphansi lingu--25 ° C (-14 ° F). Izinyanga ezibandayo kakhulu zivela ngoNovemba kuya kuNdasa kanti uJanuwari iyona ebanda kunazo zonke enesilinganiso esiphansi nesiphezulu sibe ngu-4 ° C (25 ° F) no-1 ° C (33 ° F) ngokulandelana. Ubusika bunamafu ngesilinganiso samahora angama-48 okukhanya kwelanga kuphela ngenyanga ngoDisemba. Izinga lokushisa elizungeze--15 ° C (5 ° F) akujwayelekile kule ngxenye yonyaka. Ama-snowfalls kwenzeka kaningi ngonyaka ngonyaka ngokuwa okungama-20-40 cm ngosuku olulodwa.
Ukuma kanye namabhuloho
Umfula iDanube udabula lo muzi cishe ngesigamu, ohlangothini olusentshonalanga lubizwa ngeBuda kuthi empumalanga lubizwe ngePest. Ukuma ngasenyakatho / eningizimu kungabhekiswa ekuhlobene namabhuloho edolobha:
I-Árpád Bridge (Árpád híd), Ibhuloho lesimanje elixhumanisa iNyakatho Margaret Island. Ibhuloho elide kunazo zonke eBudapest ngamamitha angama-973. Yasungulwa ngo-1950 lapho amaRoma esevele akha khona ibhuloho ukuxhuma i-Acquincum nenye indawo ohlangothini lwePest.
UMargaret Bridge (Margit híd), sibonga kalula ngesimo sayo esiyingqayizivele: yenza cishe indlela engama-35 degree yaphenduka phakathi, empumalanga eseningizimu yeMargaret Island. Ama-Trams 4 no-6 awela iDanube lapha. Leli bhuloho lakhiwa ngo-1901 laphinde labhujiswa ngesikhathi sempi ngokuqhuma. Yakhiwa kabusha ngo-1948. Itholakala enyakatho enkabeni yedolobha.
I-Chain Bridge (Széchenyi lánchíd), Kuqedwe ngo-1849, okudala kakhulu, muhle ngokuphikisanayo futhi ngokuqinisekile izithombe ezithathwe emabhulohweni kaBudapest, ezigcwele ebusuku. Kwakuyibhuloho lokuqala elihlala njalo ngaphesheya kweDanube. Ngesikhathi sokwakhiwa kwayo bekuyibhuloho lesibili ngobukhulu emhlabeni wonke. Amabhubesi amane amatshe ahlala emaphethelweni ebhuloho ngonyaka we-1852. Basinda ngenhlanhla ekuhlaselweni emoyeni ngeMpi Yezwe II.
Elisabeth Bridge (Erzsébet híd), yaqedwa ngo-1903. Isakhiwo sayo sokuqala samaketanga sabhidlizwa eMpini Yezwe II, futhi sagcina sesifakwe yibhuloho lesimanjemanje lekhebula elivulwe ngo-1964. Leli bhuloho ngendlela yenkululeko lanikezelwa kwiNdlovukazi eyabulawa ngo-1898. ibhuloho elisha lesithathu lomuzi.
Liberals Bridge (Szabadság híd), Yinhle kodwa ilula, yavula ngo-1896; ixhumanisa i-Gellért Baths (Gellért fürdő) eBuda ne-Great Market Hall (Nagyvásárcsarnok) ePest. Kusanda kwenziwa kabusha. Leli bhuloho lakhiwa kabusha ngesitayela se-Art nouveau lapho kugujwa khona imikhosi yeminyaka yobudala yaseHungary ka-1989.
I-Petőfi Bridge (I-Petőfi híd), Isikhathi eside ibhuloho eliseningizimu impela, lixhumanisa umgwaqo wangaphakathi wendandatho (Nagykörút) wePest neBuda. Yakhiwa ngenkathi yama-30s, yacekelwa phansi ngokuqhuma eMpini Yezwe II futhi yakhiwa kabusha ngo-1952.
I-Rákóczi Bridge (Rákóczi híd), Ibhuloho elisha kakhulu eBudapest, elinokwakhiwa kwesimanje nohlelo lokukhanyisa olubabazekayo lapho izibuko zibonisa khona ukukhanya kwemibani yezulu ebheke phezulu. Kwakhiwe eduze kwebhuloho lesitimela ngasohlangothini lwalo oluseningizimu. Phambilini eyayibizwa ngeLágymányosi Bridge, yakhiwa phakathi kuka-1992 no-1995, ekuqaleni yayenzelwe ukususa ukuhamba kwethrafikhi okwakukhona ngesikhathi sokuvezwa kuka-1996 okungagcinanga kwenzeka eBudapest. Yibhuloho elisha lesibili leBudapest ukusuka ngonyaka we-2013.
Iningi lezinto ezigqamile zikaBudapest zingaphakathi kokuhamba okulula komunye nomunye nesikhungo sedolobha. Zonke izindawo ezinkulu zinemigwaqo nezindlela eziwela umgwaqo zabahamba ngezinyawo. Abashayeli bavame ukulalela amasiginali omgwaqo, futhi ngokufana namanye amadolobha amakhulu aseYurophu, abahamba ngezinyawo kufanele bakhombise ngokuqinile inhloso yabo yokuwela lapho bewela khona. Izindlela eziningi zemigwaqo nezindlela zivame ukuhlanganiswa-ukusetshenziswa kwababili abahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisekili.
Uhlelo lokuhambisa umphakathi lukaBudapest lubanzi ngokulula futhi kulula ukulusebenzisa. Izivakashi zingakwazi ukuhamba ezindaweni eziphakathi nendawo nge-metro, kepha izindawo ezimbalwa ezinkulu, ikakhulukazi ohlangothini lweBuda, zisebenza ngamabhasi noma ngamathamu.
Okufanele ukwenze eBudapest
Imali yezwe yaseHungary yiHungary Forint, noma i-HUF. Izinhlamvu zemali zitholakala emaqenjini ama-5, 10, 20, 50, 100, kanye nama-200, nama-banknotes kuma-500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, namahlelo angama-20,000. Ngokuya ngamanani wemakethe, i- € 1 ishintshana cishe nge-300 i-forint. Esikhumulweni sezindiza, noma kunjalo, isilinganiso singama-245 kuphela.
Ukuthenga izivakashi nezikhumbuzo
IVáci utca iyindawo eyinhloko yezivakashi, futhi ifaka amathrekhi ajwayelekile ezindawo zokudla ezikhulukazi, izitolo zezikhumbuzo, nemikhiqizo yefashini eyaziwayo. Ngaphandle kwezikhumbuzo ezijwayelekile zabavakashi, izinto ezidumile eziqondene nesiHungary zingamalobolo, izintambo, okotshani nezinye izinto zokulingisa. I-paprika pepper nezinongo, uju, notshwala baseHungary yizinto zokudla ezidumile. I-Great Market Hall (i-Nagy Vásárcsarnok) eFővám tér iyihholo lemakethe yasemkhathini elingumlando elidayisa izikhumbuzo zezivakashi ikakhulukazi.
Izitolo ezidumile zomhlaba wonke ezifana ne-H&M, i-Abercrombie ne-Fitch, i-Intimissi, njll, zitholakala eduze kweVaci Utca, ezigcawini ezinkulu zezivakashi, nasezitolo ezinkulu zezitolo njengeWestEnd. Amanani afaniswa neWestern Europe yize ezinye izinto eziningi eHungary zishibhile.
Imfashini Yokuphela Okuphezulu
I-Andrassy Utca ingumgwaqo omkhulu weBudapest wezitolo eziphakeme zamagama emfashini njengeGucci, Prada, nomqeqeshi.
Ukuthenga ngezingubo zokugqoka okujwayelekile kuyinto ejwayelekile kubantu abaningi baseHungary ezikhungweni ezisebenzayo neziphakathi nendawo, ngoba amaholo aphansi kakhulu kunaseNtshonalanga Yurophu kodwa izingubo ezisetshenziselwa ukuthenga ezitolo ezinkulu ziyintengo efanayo. Izitolo zezandla zesibili zingatholakala kulo lonke idolobha, zivame ukuzikhangisa ngokuthi zithengisa izinto ezingama- “Angol” (amaNgisi) noma zibonisa ifulege laseBrithani. Lezi zitolo zithenga izingubo ezisetshenziswa kakhulu eNtshonalanga Yurophu futhi zizithengise eHungary, ngoba izingubo ezisetshenzisiwe ezivela kwezinye izindawo kucatshangwa ukuthi zisetshenziswe kalula noma izitayela ezifashini kunalezi zasendaweni.
Abaculi bendawo nabaqambi
IBudapest inezitolo eziningi ezincane ezidayisa izinto zasendaweni eziklanyelwe futhi ezenziwe endaweni, ubucwebe nezinto zasendlini. Kuthatha isikhathi ukuthola amagugu akho owathandayo, kepha zama ukuzulazula eduze kwe-Astoria. Amanani ngokuvamile ahambisana neNtshonalanga Yurophu.
I-Paloma Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16 (eduzane ne-Astoria). Isikhala esixubekile sokusebenzisa abaklami, izitolo ze-pop-up, nobuciko bomqondo. Izicucu ezihlukile ngamanani ashibhile, zivame ukunikwa ngabadwebi ngokwabo. Isikhala ngokwaso siyigceke elihle (futhi elidabukisayo) lesakhiwo sokuhlala esingumlando esibuyiselwe kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1800.
I-FONÓ Music House XI. isifunda, Sztregova u. 3. Ucingo: 206-5300, 203-1752. Ifeksi: 463-0479 (Thatha u-tram no. 18, 41 noma u-47 eningizimu usuka eMóricz Zsigmond körtér bese wehla endaweni yokuma kweKalotaszeg. Iya emuva ngemizuzu engu-2 bese uthatha umgwaqo wokuqala ngakwesokudla.) UFonó unikeza ukukhetha okuphezulu kakhulu kweHungary abantu, i-etno nomculo womhlaba.
Okukhethekile bendawo kuvame ukujikeleza inyama (ingulube, inyama yenkomo, inyama yenkomo, noma inkukhu), kuvame ukubandakanya ukusetshenziswa kwe-paprika ngokukhululekile, noma kunjalo kungadingeki ngohlobo olushisayo. Qaphela ukuthi - ngenxa yephutha lokuhumusha elingumlando - "isobho se-goulash" empeleni siyisobho, hhayi i- "goulash" izivakashi ezingase zijwayele ekhaya elaziwa njenge- "pörkölt".
Okukhethekile okuhle kufaka phakathi:
i-gulyás (leves) evame ukuhunyushwa ngokuthi 'isobho se-goulash' - isobho senyama esigcwalisayo (imvamisa yenkomo) namazambane ne-paprika, phakathi kwezinye izithako. Kwadliwa njengesitsha esikhulu noma njengesiqalo (esindayo). Leli gama libhekisela enguqulweni yaseHungary yenkomo enakekela i-'gulya '(inkomo).
pörkölt isipikili nge anyanisi sautéed kanye - paprika. Okufanayo nalokho okusetshenziswa njenge- 'goulash' phesheya.
halászlé - isobho labadobi lisebenze ngokuhlukile ngokuya ngesifunda
töltött káposzta - iklabishi eligakiwe
I-Balaton pike-perch (fogas)
gyümölcsleves - isobho lezithelo - elibandayo, elinoshukela futhi elimnandi, elidliwe njengesiqalo.
Ukusuka kophudingi, ungahle ungafuni ukuphuthelwa:
I-Somlói galuska, inkondlo enhlama yebhisikidi, ukhilimu kanye nososo chocolate, owasungulwa nguKároly Gollerits eGundel
I-Gundel palacsinta - I-Gundel pancake (i-crepe) - ngokugcwaliswa okulungiselelwe nge-rum, i-raisin, i-walnuts, ne-zest zest, kukhishwe ngososo we-chocolate, futhi umfundi onakekelayo angaqagela indawo yakhe yokuzalwa.
I-Kürtőskalács, (ikhekhe le-chimney) ikhekhe elimnandi lenhlama ephekwe ku-chimney eyakhiwe ngamabala futhi ihlanganiswe nebhotela noshukela ukuze yakhe i-crispy crust. Ngemuva kokuba amakhekhe esephekiwe angagoqeka ngemifantu eyahlukahlukene njengoshukela wesinamoni noma ushokoledi.
Kunezinhlobonhlobo ezinhle zamakhekhe / amakhekhe (iTorta), amanye awo ongawazi uma ujwayela ama-pastries aseViennese. Ungafuna ukuzama iDobos torta (ikhekhe likaDobos, eliqanjwe ngegama likaJózsef Dobos), noRigó Jancsi ikhekhe elikhilimu lika-chocolate.
Okuqaphelekile ngokukhethekile: Umthetho waseHungary awudingi ukuthi izindawo zokudlela zihambise noma cha (kufakiwe) imali ekhokhwayo noma ithiphu eyengeziwe kubasebenzi abalindile. Izindawo zokudlela ezihlasimulisayo, ikakhulukazi lezo ezithandwa izivakashi, zizomane zifake i-Forint eyengeziwe emigqonyeni yazo yangasese. Ngenkathi kuyisiko ukukhipha i-10% yomthethosivivinywa, kubalulekile ukubuza isikhonzi sakho uma imali ekhokhwayo ifakiwe kumthethosivivinywa nokuthi ngabe abasebenzi bathola noma iyiphi imali ekhokhwayo yenkonzo noma enye imali etholwayo. Ngokusobala, kungcono ezindaweni zokudlela ezijwayelekile eziphatha abasebenzi bazo kahle, kepha kungenzeka ungazi ukuthi udla hlobo luni lwesikhungo uze uthole inkokhelo ubuze.
Akunakusho ukuthi, uma ufuna ukuthatha amanye ama-paprika aseHungary, i-Pick szalámi, noma iwayini leTokaji, izitolo zokudla ezithengiswayo ngokwemvelo zingabizi kakhulu kunekhiyoski ekhethekile. Ezindaweni ezimaphakathi, uzothola amancanyana amancane weSpar, Aldi, Lidl, Tesco Express namaketanga aseHungary afana ne-GRoby ne-CBA. Ngaphezulu kwesikhungo, ungathola ama-hypermarkets aphethwe amanye amazwe anjenge-Auchan neTesco enobubanzi bezimpahla.
I-Budapest inikeza izindawo eziningi zokuphuza, kusuka epholile ne-Ultra-hip kuya emakethe engcolile naphansi. Uma usesimweni sokuhlangenwe nakho kweHungary, vakashela okuthiwa yi-borozó (i-vin pub). Lawa ma-pubs ajwayele emiphongolweni futhi anikela ngewayini elingabizi kakhulu laseHungary empompini ngamanani aphansi kakhulu uma ukwazile ukuthola eyodwa ngaphandle kwezindawo zabavakashi.
Amawayini edume kakhulu eHungary amawayini e-dessert avela esifundeni saseTokaj e-NE Hungary. Amawayini amancane angaziwa kodwa nokho asezingeni eliphakeme akhiqizwa ezifundeni zaseVillány, Szekszárd nase-Eger. Phakathi kwamawayini abomvu ahamba phambili yiKékfrankos, i-Egri Bikavér „Bulls Blood”, neCabernet Franc, kuyilapho amawayini amhlophe anjengeSzürkebarát, iCserszegi fűszeres no-Irsai Olivér angaba mnandi futhi aqabule. Kufanele okungenani uzame umoya waseHungary, i-pálinka, uhlobo olucacile olwenziwe ngesithelo. Okuthandwa kakhulu kwenziwa kusuka kuju, iplamu, i-apricot, i-Cherry omuncu noma i-Williams pearl.
Iziphuzo ezibandayo ezihlukile zaseHungary zokuzama i-Traubi Szoda, isithelo samagilebhisi esimhlophe kanye neMárka, usawoti we-cherry omuncu.
Omakhalekhukhwini kanye ne-inthanethi
Izingcingo ezivela kwamanye amazwe ngokuvamile zizosebenza eHungary, kepha imali ekhokhwayo ingaba phezulu uma ungavakasheli uvela ezweni le-EU. Bheka nomhlinzeki wakho wefoni ukuthola eminye imininingwane.
I-Wi-Fi itholakala kabanzi. Izindawo eziningi zokudlela nezitolo zinikeza i-Wi-Fi yamahhala kubaxhasi bayo, futhi i-Wi-Fi kwesinye isikhathi iyatholakala ezigcawini noma emapaki.
Amahostela namahhotela ngokuvamile ane-Wi-Fi yamahhala, noma angashaja imali.
Izingcingo zesikhashana zesikhashana noma izinsizakalo zedatha zingathengwa kwizinkampani ezinkulu zenethiwekhi zaseHungary njengeVodafone noma i-T-Mobile. Uzodinga kuqala ukuthenga ikhadi le-sim (okuthile okufana ne-1000-3000 HUF) bese ukhetha icebo lesitayela sokuqala esikhokhelayo. Isibonelo, uhlelo ejwayelekile lungadinga ukuthi ukhokhe i-2000 HUF ephezulu, futhi ngalokhu okuphezulu uzokwamukela i-500 MB noma i-1 GB yedatha ezinsukwini ezingama-30 ezizayo. Ukushaya nokuthumela imiyalezo kungabiza inani lokusebenzisa ngakunye (isib. I-50 HUF / iminithi noma i-30 HUF / umyalezo) futhi lokhu kuzodonswa kubhalansi yakho yasekuqaleni ephezulu.
IHungary inamazinga okushisa ehlobo ehlobo angaphezu kuka-30- degrees Celsius, ngakho-ke hlela ukugqoka kwakho ne-hydration ngokufanele.
Thepha amanzi kuyo yonke iBudapest kuphephile ukuyiphuza, ngakho-ke phatha ibhodlela ongaligcwalisa. Imithombo yomphakathi ivame ukutholakala kulo lonke idolobha. Abanye babukeka njengemithombo ejwayelekile yokuphuza. Ezinye ziyimithombo yokuhlobisa (isb. Isithombe sebhubesi elinamanzi avela emlonyeni walo) kepha futhi ziphephile ukuwaphuza. Kungaba nzima ukusho ukuthi imiphi imithombo yokuphuza, kepha kungenzeka ukuthi kulungile uma kukhona umfula ogelezayo wamanzi agelezayo (uma kuqhathaniswa namanzi avela esikhungweni), inkinobho eyenza ukuhamba kwamanzi, kanye / noma uma ukwazi ukuhamba ufike emfudlaneni wamanzi (uma ngabe kukhona ujantshi wokuqapha noma uthango). Uma ungabaza, buza umuntu.
IBudapest ngokuvamile iphephe kakhulu kubavakashi. Okukhathazeka kakhulu ngabavakashi ukugcotshwa kwempahla ethile / ukweba okuncane nemikhonyovu / ukuchitheka okungekho. Ubugebengu obunobudlova buphansi futhi akunakwenzeka ukuthi buthinte izivakashi. Izindawo eziningi ezithakazelisa izivakashi ziphephile ukuzulazula cishe ubusuku nemini. Thatha izinyathelo ezijwayelekile zokuhamba lapho uhamba wedwa noma ezindaweni ezingazodwa. Ezinye izindawo ezingaphandle kwesikhungo zingaba yingozi kakhulu ngokuhamba wedwa noma ebusuku. Buza osendaweni noma ehostela / abasebenzi basehhotela uma uhlela indlela engajwayelekile futhi uthintekile.
ISzentendre (19km enyakatho yeBuda) - Idolobha lezivakashi elidumile elihamba ngezitaladi eliseduze kweDanube. Kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20 bekungumbukiso wabaculi kanti kulezi zinsuku kunemibukiso eminingi yeminyuziyamu kanye neminyuziyamu. Ngaphandle nje kwedolobha kukhona iSkanzen, imnyuziyamu evulekile yaseHungary enezakhiwo eziningi zasemakhaya ezisezingeni eliphakeme ezibonisa futhi ziphinde zenze impilo yendabuko yaseHungary. I-HÉV ("izitimela zasendaweni / zasemadolobheni" ezenziwa yi-BKV / BKK) isuka eBatthyány tér iye eSzentendre. (Imali yokukhokha ekhethekile idlula imikhawulo yedolobha)
Balaton - ILake Balaton ihlanganisa i-592 km² cishe ihora nengxenye eningizimu-ntshonalanga yeBudapest. Lolu "lwandlel lwasolwandle" luyindawo ethandwa kakhulu yokuvakasha ehlobo lapho abantu abaningi bendawo bezophumula khona ebhishi, ukubhukuda nokuya emaphathini. Ngokuvamile, ugu oluseningizimu lugcwele emabhishi namanzi angajulile futhi luhlose ephathini ngenkathi ugu olusenyakatho lunamadwala futhi lunokuthula okwengeziwe nokuhamba ebusuku ebusuku. Amadolobha aqavile azungeze ichibi yilawa: iSiófok, iBalatonfüred, iTihany neKeszthely. Amadolobha azungeze ichibi akhonzwa ngamabhasi nezitimela kanti isikebhe sisebenza phakathi kwamadolobhana amaningi echibini.
I-Eger - Idolobhana elinezakhiwo ezigcinwe kahle zekhulu le-17-19th - kufaka phakathi i-Otretan minaret. Idolobhana leli lidume nangeSigodi Sakho Sabafazi Abahle abangaphandle kwedolobha elinenqwaba yezindawo zokuphuza utshwala ezithandwa izivakashi ukuzonambitha zikhululeke.
IGödöllő (30km empumalanga yePest) - Ikhaya leGrassalkovich Kastély (Grassalkovich Palace), phambilini ibiyindawo yokuzijabulisa yaseNdlunkulu. Isigodlo kwakuyindawo ehlala uSisi, iHabsburg Empress, u-Elizabeth. Ipaki lasebukhosini elisanda kubuyiselwa lalondoloza izihlahla zalo eziningi kusukela ekuqaleni kwekhulu le-19. (Finyelela kusuka eBudapest ngojantshi wesitimela osuka eKeleti pályaudvar noma i-HÉV ("izitimela zasendaweni / zasemadolobheni" ezisetshenziswa yi-BKV / BKK) kusuka ku-Örs vezér tere to Gödöllő. (Ungathathi lezo ezineziteshi ezahlukene zesiteshi)
I-Visegrád - Idume ngesigodlo saso sobukhosi sangaphambilini Indawo leyo yavuselelwa ngokwengxenye futhi yakhiwa kabusha. Inombono omuhle kakhulu obheka amagquma aseduze nesigodi somfula. Izinsizakalo zebhasi elingaphansi kweVolánbusz
I-Esztergom - Idolobha eliyiBorder eSlovakia. Isiza se-basilica enkulu kunazo zonke eCentral Europe.
IVác - (32km enyakatho nePest) isiteyidi esikhulu seBaroque esigcawini esikhulu, iCathedral, i-Triumphal Arch, izidumbu zesonto laseDominican (Memento Mori). Finyelela kusuka eBudapest ngo-M suburV wesitimela wasedolobheni - Nyugati pályaudvar.